Misokatra amin'ny 2024 i Rosewood Miyakojima
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Misokatra amin'ny 2024 i Rosewood Miyakojima
Ny trano fialamboly tena lafo vidy dia maneho ny fananana Rosewood voalohany any Japon
Rosewood Hotels & Resorts hitantana Rosewood Miyakojima ao amin'ny Nosy Mikayo
55-villa, toeram-pialofana lafo vidy indrindra dia eo amin'ny toerana ankalazaina noho ny morontsiraka mahafinaritra
Rosewood Miyakojima dia mety ho lasa iray amin'ireo toerana fialan-tsasatra ankafizin'izao tontolo izao
Rosewood Hotels & Resorts notendren'ny Mitsubishi Estate Co., Ltd. hitantana ny Rosewood Miyakojima ao amin'ny Nosy Mikayo any amin'ny nosin'i Okinawan, nisokatra tamin'ny 2024. Ny trano 55-villa, ultra-luxury dia maneho ny fananana Rosewood voalohany ao Japon, amin'ny toerana iray malaza ho an'ny morontsiraka mahafinaritra miaraka amin'ireo toerana mahafinaritra be any amin'ny firenena.
Ny Nosy Miyako sy ireo nosy akaiky dia manome fasika fotsy malefaka sy kilometatra misy ranomasina turquoise-manga tsy hita noanoa. Ny niainany anaty rano dia manomboka amin'ny snorkeling any Yabiji, ilay vatoharan-dranomasina lehibe indrindra any Japon, hatramin'ny fisitrihana ny lava-bato ao ambanin'ny rano miaraka amin'ny fiainana an-dranomasina sy ny jono anaty rano miavaka.
Manakaiky ny tanimbary misy fary maitso i Rosewood Miyakojima, hipetraka amin'ny saikinosy mitokana voahodidina amoron-dranomasina amoron-dranomasina fotsy, fananganana vatolampy mahatalanjona ary fizahan-dranomasina manaitra. Ireo mpitsidika tonga dia hahatsapa ny fasika ao ambanin'ny tongony ao anatin'ny 20 minitra avy eo amin'ny seranam-piaramanidina Miyako ary 30 minitra avy eo amin'ny seranam-piaramanidina Shimojishima izay mahazo sidina mivantana avy any Hong Kong sy ireo tanàna lehibe any Japon.
Any ankoatry ny toeram-pialantsasatra dia hahita toerana be dia be mamirapiratra ny mpitsidika, manomboka eo amin'ny andohalambo vato voajanahary amoron-tsiraka Sunayama manakaiky ny trano jiro tsara toerana ao Higashi-Hennazaki Cape (toerana iray "Toerana hatsaran-tarehy miavaka") sy ny fito kilometatra faritr'i Yonaha Maehama, laharana matetika ho morontsiraka tsara indrindra any Japon ary malaza amin'ny filentehan'ny sinema. Na dia fitsangatsanganana kely aza dia hampiharihary ny fomba amam-panao, ny kolontsaina, ny fitenim-paritra, ny fahandroana sakafo ary ny asa-tanana ary ny fomba Okinawan uchinanchu ("olona an-dranomasina") izay monina ao amin'ilay nosy.
"Faly izaitsizy tokoa izahay fa ny fahatongavanay voalohany any Japon dia ho amin'ity toerana mahafinaritra ity, izay hanehoana ny sonian'i Rosewood hoe A Sense of Place ao anatin'ny toerana mahavariana sy kolontsaina manankarena," hoy i Sonia Cheng, tompon'andraikitra ambony ao amin'ny Rosewood Hotel Group . "Voninahitra ho anay ny manana ny Mitsubishi Estate ho mpiara-miasa aminay ary tena mankasitraka ny fahatokisana napetrany taminay hanome izany traikefa miavaka izany."
“Ny fahatsapan'ny Rosewood ny eo an-toerana sy ny fanolorany tena ho amin'ny fahaiza-mandray vahiny ambony indrindra, izay mifanaraka tanteraka amin'ny filozofianay momba ny fivoaran'ny tanàna, nanome aingam-panahy anay hanendry azy ireo hitantana ity toeram-pialantsasatra manokana ity, "hoy i Atsushi Nakajima, tompon'andraikitra ambony, Mitsubishi Estate Co., Ltd." Matoky tanteraka izahay fa Rosewood Miyakojima dia ho lasa iray amin'ireo tanjona fialan-tsasatra ankafizin'izao tontolo izao rehefa manokatra ny varavarana. ”